Amboary haingana sy mora ny horonan-tsary amin'ny Linux amin'ny VidCutter | Avy amin'ny Linux
Amboary haingana sy mora ny horonan-tsary amin'ny Linux amin'ny VidCutter
Ny vanim-potoanan'ny youtubers Mitohy manamafy izy io ary mihamaro hatrany ny sahy miakatra horonan-tsary na inona na inona karazana mankamin'ity sehatra lehibe ity, amin'ny fomba mitovy, tsikelikely mamaky kely ary mijery multimedia hafa. Izany rehetra izany dia miaraka aminy, ny famoronana fitaovana isan-karazany ahafahantsika manova horonantsary, iray amin'izany ny VidCutter izay heveriko ho fitaovana tsotra sy mahomby indrindra hanatevin-daharana / handefasa horonan-tsary.
VidCutter Mora ny mampiasa azy amin'ny hadalana, izay ankasitrahana, saingy ampiana ity endri-javatra tsara ity dia mahomby ihany koa, misintona fotsiny, mifantina, milamina ary manatevin-daharana mba hampifangaro horonantsary haingana miaraka amina famaranana matihanina.
1 Inona ny VidCutter?
2 Ahoana ny fametrahana VidCutter?
2.1 Ampidiro ny VidCutter amin'ny Distro Any
2.2 Ampidiro ao amin'ny ArchLinux sy ny derivatives ny VidCutter
2.3 Ampidiro ny VidCutter amin'ny Debian sy ny derivatives
Inona ny VidCutter?
Izy io dia fitaovana maimaim-poana sy maro karazana (Linux, Windows, MacOS), nosoratana tamin'ny QT5 avy Pete alexandrou, izay ahafahanao manapaka, mizara, miasa ary manatevin-daharana horonan-tsary haingana sy mora, mahatonga ny fizotry ny fanovana horonan-tsary hahafinaritra sy mahomby.
Na ny interface na ny fampiasana azy dia tena tsotra, miaraka amin'ny tanjona mazava fa tsy manindry im-betsaka ny mpampiasa, fa enao fotsiny ny horonantsary tianao hidirana / hokapa / afangaro, safidio ny tsipika tianao hampiasaina sy hotehirizinao. Afaka minitra vitsy dia hahazo izay tadiavintsika isika 🙂
Ahoana ny fametrahana VidCutter?
Ampidiro ny VidCutter amin'ny Distro Any
VidCutter dia zaraina amin'ny alàlan'ny a AppImage, izay atolotry ny mpamorona mba hampiasaina raha toa ka tsy miorina amin'ny Debian na ArchLinux ny distro anao, satria ny VidCutter dia manana installer namboarina ho an'ireo distros ireo, ao amin'ny AUR sy Launchpad.
Raha sendra maniry mametraka avy amin'ny AppImage ampidino fotsiny avy amin'ny: VidCutter-2.5.0-linux-x64.AppImage, tsy maintsy manana Qt 5.5 sy PyQt 5.5 napetraka koa ianao.
Avy eo tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto:
Toy izany koa no ahafahantsika mametraka miaraka amin'ny python
Ampidiro ao amin'ny ArchLinux sy ny derivatives ny VidCutter
Ny mpampiasa ArchLinux sy ny derivative dia afaka mametraka VidCutter mivantana avy amin'ny AUR, fonosana azo antoka ary fonosana farany misy eo an-dalam-pandrosoana.
Ny fametrahana avy AUR dia hisy ny terminal ary mihazakazaka:
Ampidiro ny VidCutter amin'ny Debian sy ny derivatives
Ireo mpampiasa Ubuntu / Mint / Debian ankoatry ny hafa, dia afaka mametraka amin'ny alàlan'ny Launchpad PPA:
Mba hanaovana izany dia sokafy ny terminal ary alefaso ireto baiko manaraka ireto:
sudo add-apt-repository ppa: ozmartian / apps sudo apt-mahazo fanavaozana sudo apt-mahazo mametraka vidcutter
Ity fitaovana tsotra sy azo ampiharina ary mahery ity dia azo antoka fa hanampy mihoatra ny iray hanovana horonantsary haingana. Ho fanampin'izay, ny fivelaran'izy ireo dia mavitrika tokoa ka fantatray fa hihatsara hatrany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Amboary haingana sy mora ny horonan-tsary amin'ny Linux amin'ny VidCutter
oscar gunsett dia hoy izy:
Tsy misy amin'ny Debian / 64-bit
Mamaly an'i oscar gunsett
Ary any Gentoo, tsy azoko an-tsaina izany, ao amin'ny repo. Manokana.
Daniel Herrero dia hoy izy:
Fantatrao ve raha tsy mamaha ny horonam-peo sy horonan-tsary izy rehefa manova zavatra voarakitra ao amin'ny DTT?
Valiny tamin'i Daniel Herrero
Ren Canteros dia hoy izy:
Tsara kokoa ve ny mampiasa an'ity rindranasa ity fa tsy mampiasa ffmpeg? Aleoko ity farany, izay ho an'ny zavatra tiako hatao (horonantsary mozika) dia ampy ahy.
Valiny tamin'i Ren Canteros
Fandaharana tena tsara, ary mora ampiasaina. Tsy dia misy endri-javatra be dia be, fa izay no tena mampiavaka azy. Ho ahy, hatramin'ny nahafantarako azy dia nanjary nilaina izy. Vao tsy ela akory aho no namela lahatsoratra momba azy tao amin'ny bilaogiko ( http://www.oblogdeleo.es/corta-e-pega-videos-de-forma-sinxela-con-vidcutter/ ).
RADEL dia hoy izy:
Miarahaba an'ireo mpampiasa sy mpampiasa Internet rehetra, mangataka mafy aminao aho mba ampianareo amin-katsaram-panahy hamaha olana vitsivitsy amin'ny Vidcutter ao amin'ny rafitra fiasa Linux Fedora 28 LXDE x86 x64. Ny olana dia rehefa milalao ilay rakitra an-tsary dia tsy aseho azy, ny audio ihany no heno ary afaka jerenao ny bikan'ilay horonan-tsary hanovana azy, fa tsy aseho azy, ny maizina fotsiny misy ambadika audio.
Misaotra anao mialoha aho noho ny fiheveranao tsara, fanampiana ary valiny haingana.
Valiny amin'i RADEL